I-Raw L-Epinephrine HCL (55-31-2) HPLC≥98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Abanye / L-Epinephrine HCL (55-31-2)
SKU: 55-31-2. Isigaba: Abanye
I-AASraw inekhono lokuqamba nokukhiqiza kusuka ku-gram ukuya ku-L-Epinephrine HCL (i-55-31-2), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
L-Epinephrine hydrochloride iyisidakamizwa esasimanga kabi esasetshenziselwa ukusizwa ngokuboshwa komzimba ngokungazelelwe futhi ekuhlengeni ukushaqeka kwe-anaphylactic, kodwa futhi ekwelapheni kwezinye izifo ezibangelwa ukwelapha (njenge-asthma i-bronchial, urticaria).
Ividiyo ye-L-Epinephrine HCL
L-Epinephrine HCL Abalingiswa basisekelo
Igama: L-Epinephrine HCL
Formula Yamamolekhula: C9H14Cl2NO3
Isisindo somzimba: 183.204g / mol
I-Melt Point: I-61-71 ° C
Ukusetshenziswa kwe-L-Epinephrine HCL (55-31-2)
I-Epinephrine HCL (i-55-31-2) isilinganiselwa somdala
Uma isetshenziselwa ukulwa nokungezwani komzimba,
Okokuqala, umjovo ongaphansi kwe-0.2 ~ 0.5mg, uma kunesidingo, ungaphindwa izikhathi ezingu-1 njalo emaminithini we-10-15, umthamo ungancipha kancane kancane zibe yi-1 izikhathi ze-LMG; ukuphazamiseka kwe-anaphylactic, umthamo wokuqala we-0.5mg, injection yangaphakathi noma yangaphakathi, khona-ke i-0.025 ~ 0.05mg enamandla, uma kudingekile, ingaphindwa njalo emaminithini we-5-15 ukuya kumuthi.
lisetshenziselwa ushukela ophansi wegazi, nomthamo owodwa we-0.3mg, umjovo ongaphansi kwegazi noma we-intramuscular.
ukuphathwa kwe-spasm ye-bronchial, i-0.2 ~ 0.5mg yokuqala, ukujova okungaphansi kwesikhumba, uma kunesidingo, kungaphindwa njalo emaminithini we-20 kumahora we-4, ukwandisa kancane kancane kube izikhathi ezingu-1 LMG.
isetshenziselwa ukuboshwa kwenhliziyo, ihlanjululwe ngemuva kokujola noma ukumnika okungahambi kahle, izikhathi ezingu-1 0.1 ~ LMG, uma kunesidingo, zingabuyekezwa njalo ngemizuzu ye-5.
njengesidakamizwa se-vasoconstriction ngesikhathi se-anesthesia, ukuhlushwa kwe-L-Epinephrine HCL (i-55-31-2) ku-anesthetic fluid yendawo, i-block subarachnoid iphezulu (1: 10 000), inani elingu-0.3mg. Ukungena kwe-anesthesia yendawo kuncane kakhulu (1: 100 000 noma i-1: 200 000), inani eliphelele akumele lidlule i-LMG.
i-spasm anti-bronchial, injection engaphansi kwesisindo 0.01mg / kg noma indawo yomzimba 0.3mg / m2, isilinganiso esiphezulu se-y izikhathi 0.5mg, uma kunesidingo, njalo imizuzu engu-L5 iphinda imithi L, izikhathi zeToal 2, ngemuva kwamahora angu-4 l izikhathi;
ngenxa yeshukela ephansi yegazi, isisindo esingaphansi kwesigcawu noma se-intramuscular ngesisindo 0.01mg / kg noma endaweni yomzimba 0.3mg / m2;
isetshenziselwa ukuboshwa komzimba, i-0.005 ~ 0.01mg / kg enhliziyweni noma nge-intravenously, noma i-0.15 ~ 0.3mg / m2 yendawo yomzimba.
Imiyalo yokuhlela kweDrug Administration
ukuhlala isikhathi esiningi noma ukusetshenziswa kakhulu kungenza ukuvimbela izidakamizwa, umise umuthi izinsuku eziningana, umphumela ungabuyiselwa.
ne-1: ukuxilongwa kwe-X -UMX (1mg / ml) ye-L-Epinephrine HCL (1-55-31), enhliziyweni noma ngaphambi kokumnika okune-intravenous kufanele ihlanjululwe, hhayi umjovo ongaphakathi wokunciphisa umzimba, okwakamuva kungabangela ubuhlungu obukhulu obukhulu be-vasoconstriction, okwenza kube nezicubu ze-necrosis.
ukujova okuphindaphindiwe endaweni engaguquki kungabangela izicubu ze-necrosis, isayithi lokujola kufanele lishintshe.
uma isetshenziselwa ukushaqeka kwe-anaphylactic, ivolumu yegazi kufanele igcwaliswe ngesikhathi esisodwa ngenxa yokwenyuka kwemithwalo yegazi kanye nomthamo wegazi owanele.
Indlela yokuthenga i-L-Epinephrine HCL kusuka ku-AASraw
I-Dyclonine HCL powder